IMERINTSIATOSIKA:MITSIPIKA NY FANEMORANA NY FIFIDIANANA NY BEN’NY TANANA
On oct 29, 2018 16 221
Manoloana ny toen-draharaha politika misy amin’izao fotoana izao, naneho ny heviny ny Ben’ny tananan’ Imeritsiatosika Parson Randriambolanarivo. Amin’ny maha mpanorina ny fikambanana Tanana Mijoro azy dia mitazona ny fotokevitra hijoroany izy ka nilaza fa tsy hanohana kandida.
Mahakasika ny fifidianana, nisy ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety tamin’ny herinandro lasa. Nandritra izany no nanambarany fa tsy tokony ho tanterahina ny fifidianana izay hatao ny 7 novambra ho azy izany. » Ny lafin’ny fampandrosoana, ny fanentanana ny tsirairay amin’ny adidiny », izay no tokony hatao, hoy izy.
« Tsy mbola nisy lisi-pifidianana tsy nahitana olana izany saingy ilaina ny fanatsarana . Ny kandida tsirairay no tokony hanentana ny olony hanaramaso sy handray anjara aminny fadatsaham-bato. tsy ekena araka izany ny hanemorana ny fifidianana », hoy izy namarana ny resaka.
ARAHABA SOA: LE NOUVEAU PROJET IMMOBILIER DE LA SOCIÉTÉ IVANA
FITORIANA FILAZANTSARA: MANKALAZA NY FAHA15 TAONANY NY GAEFI